Ciidan Qorashadii Ma Ceeb Bay Noqotay iyo Cilmi Aanay Cidi Doonayn | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Ciidan Qorashadii Ma Ceeb Bay Noqotay iyo Cilmi Aanay Cidi Doonayn
Ciidan Qorashadii Ma Ceeb Bay Noqotay iyo Cilmi Aanay Cidi Doonayn
Markaan taariikhda Soomaaliya, gaar ahaan ciidankii Soomaliyeed aan dib u milicsanno qiimihii iyo sharaftii uu lahaa waxaa mudan in aan iswaydiinno maanta sidii ma yahay? Haddii uusan ahayn maxaa u sabab ah?
Ma ogtahay muwaadinka Soomaliyeedow in:
Dunida horumartay marka la eegayo horumarkooda waxaa laga eegaa dhinacyo badan sida dhaqaalaha uu waddanku leeyahay, tirada dadka waxbartay, dadka ku nool iyo awoodda ciidan ee uu leeyahay waddankaas. Waddan kasta wuxuu ku faanaa ama uu ugu gooddiyaa waddamada dariska la ah haddii ay wax xadgudub ah sameeyaan waa ciidamadiisa, balse su’aasha mudnaanta leh oo in la isweeydiiyo mudan waa Soomaalida maanta maxay madaxa ugu luxaan dowladaha dariska oo ay taladii dalka ugu wareejiyeen ma awood dhaqaale baan jirin mise awood ciidan?
Mudane madaxweyne, mudane wasiir ma ogtahay:
In dhallinyaro badan oo ku rajo weynaa inay dalka iyo dadka daafacaan, ciidan qaran inay noqdaanna diyaar u ahaa inay ka niyad jabeen rajadii ay lahaayeen sababo badan awgood.
Ma ogtahay wasiir inay daryeel la’aanta baahsan ee ciidanka Soomaliya dib u celisay kumannaan aqoonyahanno ah oo diyaar u ahaa ka qeybgalka dhismaha ciidan qaran?
Ma dareentaa xanuunka ay leedahay markii askariga dhaawaca ah ee AMISOM loo qaado dalka dibaddiisa halka kan Soomaaliga ah ee muwaadinka ah uu dayac iyo rafaad kula nool yahay qoyskiisa, haddii uu caafimadana uusan lahayn rajo uu dib ugu soo noqdo mar labaad ciidanka?
Mase la socotaa in dhallinyaro ka baxday jaamacadaha ay ku jiraan hadda ciidamada xoogga dalka haddana aysan helin dhiirragalin?
Mase ka warqabtaa in ay dhallinyaradu dhib u aragto odayaasha ku dooda inay khibrad ku joogaan meesha oo sidaas dalacsiin iyo darajooyina ku hela?
Ma ogtahay muwaadin kastow in uu waddanku xaq kugu leeyahay?
Sida la wada ogyahay dalalka ugu horumarsan dunida waxaa horumarkaas ka taliyay waa shacabkiisa ma ahan ummado kale oo kor uga yimid.
Waxaa xaqiiqo ah in shacabka Soomaaliya aysan dhab ka ahayn wax u qabashada dalka, sababtoo ah aabbaha Soomaaliga ag marnaba kuma qanacsana inuu wiilkiisa noqdo ciidan daafaca dalka halka uu la rabo wiilkiisa inuu noqdo dakhtar ama injineer iyo wax la mid ah.
Waxaa hubaal ah in uusan wiilka Soomaaliga sinnaba u rabin noqoshada ciidan, laakiin uu doonayo inuu nabad ku seexdo kuna soo tooso!
Waxaa layaab leh in aysan hooyooyinka Soomaaliyeed gabdhahooda ku dhiirragalin inay guursadaan nin ciidan ah oo dalka iyo dadka daafici kara!
Si loo helo ciidan qaran oo leh aqoon iyo karti dheeraad ah waa in ay dowladu:
1) Abuurtaa goobo lagu wacyigaliyo dhallinyarada, isla markaana lagu siiyo tababarro aqooneed oo la xiriira kaalinta muwaadiniinta ee ciidanka
2) Muhiimadda koowaad siisaa ciidanka Soomaaliyeed dhan kasta sida mushaar siinta ciidamada si joogto ah waayo ciidan aanay caloosha u buuxin reerkiina cidlo ka yahay cadow kaama celin karo.
3) Geysaa qof kasta oo ciidan ah halka uu u qalmo ama darajada uu yahay xag aqooneed iyo xirfadba
Shacabka Soomaliyeed waxaa saaran mas’uuliyad ah
1) In ay dhiirragaliyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira ciidamada, ayna u muujiyaan inay muhiim tahay noqoshada mas’uul lagu aamino ilaalinta dalka iyo dadka
2) In takoorka lagu hayo ciidanka laga daayo loona sheego in ay u shaqeynayaan shacabka iyo dalka.
Haddii la raaco maamuuska iyo shuruucda lagu hanan karo ciidan qaran waxaa hubaal ah in ay dalkeenna wax badan iska beddeli doonaan, dadka iyo dalkuna ay ka maarmi doonan ciidamo shisheeye.
Qore: Faadumo Cabdi Cali
Previous articleWaxyeellada Cudurka Cagaarshowga
Next articleShacabkayagu Dowladnimo Ma u Diyaarsan Yahay?